Manchester City oo weli aaminsan inay hogaamineyso loolanka loogu jiro Lionel Messi'
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester City oo weli aaminsan inay hogaamineyso loolanka loogu jiro Lionel Messi’
Manchester City oo weli aaminsan inay hogaamineyso loolanka loogu jiro Lionel Messi’
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa weli kalsooni ku qaba in ay yihiin kooxda ugu cad cad helitaanka xidiga Lionel Messi .
Mustaqbalka 33 jirkaan ayaa weli ah mid si weyn loo hadal hayo maadaama qandaraaskiisa Camp Nou uu dhacayo dhamaadka bisha June.
Xiddiga reer Argentina ayaa isku dayay inuu si xor ah kaga tago kooxda reer Catalan xagaagii la soo dhaafay laakiin heshiiska ayaa waxaa hor istaagay kooxda oo ku adkeysatay inay qasab tahay inuu arko sannadka ugu dambeeya ee qandaraaskiisa.
Messi ayaa markale qaab ciyaareed xoogan ku jira kooxda Ronald Koeman xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 24 gool, islamarkaana diiwaan geliyay sagaal caawin 32 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegtay in South America uu u furan yahay suurtogalnimada inuu heshiis cusub u saxiixo Barca iyadoo ku xiran natiijada ka soo baxda doorashada madaxtinimada ee kooxda.
Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale si xoogan loola xiriirinayay Messi, laakiin sida laga soo xigtay The Mirror , Man City weli waxay aaminsan tahay inay hogaamin doonaan safka hadii weeraryahanku go’aansado inuu koox cusub raadsado.
Pep Guardiola kooxduusa ayaa sidoo kale la sheegay in ka go’an tahay inay la soo wareegto xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland .
Previous articleArsenal oo guul ka gaartay Kooxda Leicester City Xili uu maqnaa Aubameyang
Next articleManchester United oo wadahadalo heshiis kordhin ah kula jirta Eric Bailly.